Koobkii Champion-ka ee Real Madrid Ku Guuleysatay Oo La Xaday
HomeWararka MaantaKoobkii Champion-ka ee Real Madrid Ku Guuleysatay Oo La Xaday
Dhaco ugub ku ah kubadda cagta ayaa ka dhacday garoonka tababarka ee kooxda Real Madrid ee Valdebebas, kadib markii la xaqiijiyey in Axaddii toddobaadkan laga waayey xaruntaas koobkii Champions League ee ay Real Madrid ku guuleysatay sannadkan.
Real Madrid ayaa koobkii 10aad ee Champions League ku guuleysatay sannadkii tegay, kaas oo loogu magac daray La Décima maadaama uu dhaafay tiradii lambarka koowaad isla markaana ay gaadhay laba god (10).
Koobkan ayaa halkii loogu talo galay ee uu yaalay laga waayey, iyadoo sagaalkii koob ee kale ee ka horreeyey ay halkoodii yaalaan. Lama garanayo halka uu tegay, hase yeeshee sida uu qoray wargeyska AS, waxay noqonaysaa laba arrimood midkood uun. In laga dejiyey oo meel kale la dhigay iyo in laga xaday garoonka.
Highlights : Ross County vs Celtic
Ciyaar Xiiso Badan oo Dhex Martay Kooxda Wasarada Tamarta iyo Shunuuf Tartaanka Kubada Kolayga Ee Bisha Ramadan Maxamed-Rashid Cup